တစ်ခုလပ် မမ – CHAR TAKE
လှမေသည် အသက်(၂၆) တခုလပ် တယောက်ဖြစ်ကာ ငွေကြေးလည်းပြည့်စုံသူတဦးဖြစ်သည်။ ယောကျာ်းဆုံးသွားသည်မှာ သုံးနှစ်ခွဲခန့်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးကာမအရသာကို ချိုသည်၊ ခါးသည်သိနေရက်နဲ့ သူမ၏မပြည့်ဝသော ဆန္ဒများ အတွက် ရတက်မအေးနိုင်အောင်ဖြစ်နေရလေသည်။
ယနေ့ညလဲ ကြွေးတောင်းသွားစရာရှိသဖြင့် အောင်မင်းကိုအဖော်ခေါ်ထားသည်။ မိန်းမသား တယောက် ထဲနေသူမို့ ဟိုနား သည်နားသွားစရာရှိလျှင် အောင်မင်းနဲ့သာ သွားလေ့ရှိပါသည်။ အောင်မင်းမှာ သူမထက် အသက်အများကြီးငယ်သည်မို့ လူအမြင်လဲတင့်တယ်သည်။ အပြင်သွားမည်ဖြစ်၍တံခါးအားလုံးပိတ်ကာ အဝင်အထွက်ပေါက်လေးသာ အသာဟထားလိုက်သည်။
အောင်မင်းသည် ဟထားသော တံခါးလေးကို တွန်းဖွင့်ကာ အိမ်ထဲသို့လှမ်းကြည့်၍ ပြုံးပြလိုက်ပြီး ထိုင်ရာမှ အထတွင် မလှမေသည် သူမခေါင်းလေးကို လက်တဖက်မှ ကိုင်ရင်း ကုလားထိုင်ပေါ်သို့ ပြန်ထိုင်ကျသွားသည်။” အို..မူးလိုက္တာ.. ”အောင်မင်းက ကမန်းကတန်းအနားသို့ ရောက်သွားသည် ။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ မလှမေ ၏ နားထင်လေးနှစ်ဖက်ကိုသာ နှိပ်ပေးနေ၏။
မွှေးကြိုင် လှသော လှမေ၏ရနံ့များက အောင်မင်း၏ရင်ကို လှုပ်ခါလေပြီ။ ထို့အပြင်အသက်ရှူလိုက်တိုင်း နိမ့်ချီမြင့်ချီဖြစ်နေသော နို့အုံဖောင်းဖောင်းမို့မို့တွေက်လဲ ရမ္မက်စိတ်ကိုနှိုးဆွနေချေသည်။ အောင်မင်းသည် တံထွေးကိုမျိုချရင်း ယပ်ခပ်ပေးနေသည်။ သူမကို စိုက်ကြည့်ကာ ယပ်ခတ်ပေးနေသော အောင်မင်းကို မျက်လုံးလေးမှေးကြည့်ရင်းကလှမေထဖက်ချင်စိတ်တွေပေါက်နေရသည်။မိန်းမသားမို့သာထိန်းနေရသည်။ အောင်မင်းအဖို့လဲအခက်တွေ့နေသည်။ဟိုတနေ့ကမှ ချစ်သူချိုချိုကို ပါကင်ဖွင့်ပြီး အသာချော့လိုးခဲ့သည်။
ချိုချိုကို နှစ်ချီ နှစ်မောင်းလိုးပြီး သူ့ကိုနောက်ထပ် အတွေ့မခံသဖြင့် အောင်မင်းကာမဆန္ဒတွေ မငြိမ်းသေးချေ။ ယခုလဲ ဒီလောက်တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင် ဆော်ကြီးနဲ့ ပူးပူးကပ်ကပ် နေနေရတော့စိတ်တွေမနည်းထိန်းနေရသည်။ မှိန်းနေသော မလှမေကို ကြည့်ရင်းအောင်မင်းတယောက် တက်လိုးပစ်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာသည်။
သူ၏လီးတန်ကြီးကတော့ ပုဆိုးအောက်မှာ တောင်မတ်နေသည်မှာ ပုဆိုးပင်ငေါထွက်လို့နေသည်။ အခုနေ မလှမေသာ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အခက်ပဲဟု တွေးမိနေ၏။ လှမေ၏မျက်ခွံလေးများ အသာမှေးရင်း အောင်မင်း၏ပုဆိုးထဲက တဆတ်ဆတ်တောင်နေတဲ့လီးကြီးကို ကောင်းကောင်းမြင်နေရသည်။
တိတ်ဆိတ်မှုသည် ကာမစိတ်ကို ထကြွစေ၏။ လှမေ၏စောက်ပတ်ထဲတွင်လည်း စောက်ရည်လေးများ စို့ထွက်နေပြီဖြစ်သည်။ အကြင်နာလေးတွေနဲ့ ယက်ခပ်ပးနေတဲ့ လေအေးလေးများသည် လှမေ၏ ရင်ထဲ အသဲထဲသို့ပင် အေးစိမ့်သွားနေသည်။ လှမေတယောက်သက်ပြင်းမျှင်းမျှင်းလေး ချလိုက်မိ၏ ။ အရွယ်ခြင်းမ တူသူမို့ ပိုပြီးသေချာအောင် လှမေ အချိန်ဆွဲနေရ၏။ နောက်တော့မျက်လုံးလေးအ သာဖွင့်ကြည့်ပြီး အံ့သြဟန်ဖြင့်…” ဟယ်..အောင်အောင် ခုထိ အိမ်မပြန်ရသေးဘူးလား.. ”” ဟုတ်တယ်..မမ၊ မမကို စိတ်မချလို့၊တော်ကြာ ခေါင်းပိုကိုက်လာရင် ဘယ်သူမှ မရှိမှာစိုးလို့ ”” အောင်အောင်ရယ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ”
လွေမကအသာအယာထပြီး လဲက်မဲ့ဟန်လေးလုပ်ပြလိုက်တော့ လက်သွက်တဲ့အောင်မင်းကလှမ်းပြီး သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကိုပွေ့ထား လိုက်၏။ ” လာ..မမ အခန်းထဲ တွဲပို့ပေးမယ် ”အောင်မင်း၏ရင်ခွင်ထဲ မှေးရင်း လှမေသည် အခန်းထဲသို့ တွဲဝင်လာခဲ့သည်။ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ထိန်းထားပေးသော အောင်မင်း၏ လက်တဖက်ကလှမေ၏ နို့အုံလေးကို ဆုပ်ကိုင်ထား၏။အောင်မင်းသည် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စေတော့ လိုးပစ်လိုက်တော့ မည်ဟု ဆုံးဖြတ် လိုက်တော့သည်။ သူကိုင်ထားသောလှမေ၏ ရင်သားများသည် မာတင်းနေ၏။
တွဲလာရင်း ကြီးမားစွံ့ကားတဲ့ ဖင်သားကြီးတွေက သူ့ကိုလာ ပွတ်နေတော အောင်မင်း၏လီးက တဆတ်ဆတ် တောင်နေပေပြီ။ လှ မေ၏ခေါင်းကဆံနွယ်လေးများကို အောင်မင်းတချက်နမ်းပစ်လိုက်သည်။ နုဖတ်နေသောလှမေ၏ အသားစိုင်များကလည်း သူ၏ကာမစိတ်ကို ချွန်းမအုပ်နိုင်အောင် နှိုးဆွနေ၏ ။ လှမေ၏ ကိုယ်လုံးလေးကိုကုတင်ပေါ်လှဲသိပ်ရင်း အောင်မင်း၏ကိုယ်လုံးကြီးကကပ်ပါလာသည်။ သူ့ပခုံးပေါ်သို့ တင်ထားသော လက်နှစ်ဖက် ကလဲ မလွှတ်။ တဦးကိုတဦးစိုက် ကြည့်ပြီး လှလှ၏နဖူးကို အောင်မင်းကစနမ်းလိုက်တော့သည်။ နှစ်ဦးသားထိန်းချုပ်ထားသော စိတ်များကို လွှတ်ပေးကာ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်လိုက်မိကြသည်။ တော်တော်နှင့် မခွာကြပေ။ လှမေက အောင်မင်း၏ ကျောပြင်ကိုဖက်ထားသည်။အောင်မင်းကလဲ အင်္ကျီပေါ်မှ သူမနို့နှစ်လုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ချေပေးနေ၏ ။” ချစ်တယ် မမရယ်..ချစ်တယ် ” ” မမလည်း မင်းလို ပါပဲ အောင်အောင်ရယ်.. ”
အောင်မင်းက လှမေ၏တကိုယ်လုံးကိုပွတ်သပ်ရင်း နှိပ်ကြယ်သီးလေးများကို တလုံးချင်းဖြုတ်ကာ သူမ၏ဘရာစီယာပေါ်ကနေ နမ်းနေ၏။ ပြီးနောက် ဘရာစီယာအောက်ဖက်ကို လက်လျှိုသွင်းပြီးနို့အုံကြီးကို ဆွဲကိုင်လျက် နို့သီးခေါင်းလေးကို ချေမွပေးလိုက်သည်လှမေ၏နို့အုံကြီးမှာ တင်းတင်းအိအိလေးရှိနေသောကြောင့် အရသာခံကာကိုင်နေပေမယ့် ဘရာစီယာခံထားသည့်အတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုင်တွယ်ကာနယ်လို့မရဖြစ်နေသည်။ ထို့နောက် လှမေ၏နောက်ကျောကိုလက်လှမ်းပြီး ဘရာစီယာချိတ်ကို ဖြုတ်ကာ ချွတ်လိုက်သောအခါ နို့အုံကြီးနှစ်လုံးက ထင်းထင်းလင်းလင်းကြီး ပေါ်ထွက်လာပါသည်။
အောင်မင်းသည် မို့မို့ဖောင်းဖောင်းဖြစ်နေသော နို့အုံကြီးများကို လက်ဖြင့် စုံကိုင်ပြီး စို့ပေးနေသည်။ လှမေကတော့သူမလက်ချောင်းလေးတွေကို အောင်မင်းဆံပင်များအကြား ထိုးဖွရင်း တအင့်အင့်ဖြင့် အသံလေးများထွက်နေရ၏။အောင်မင်းသည် လှမေ၏ခါးလေးကိုပွတ်ပေးနေရာက သူမ၏ထဘီကို ချွတ် လိုက်တော့သည်။ လီးနဲ့ဝေးတာ သုံးနှစ်တောင် ရှိနေတဲ့စိမ်းစိမ်းညို့ညို့ မို့ထွက်နေတဲ့ လှမေ၏စောက်ဖုတ်လေးကို ရွရွလေးပွတ်ပေးနေ၏။
အနေရခက်လှသောလှမေ အောင်မင်း၏နှုတ်ခမ်းကို ဖမ်းပြီး လျှာလေးထိုးပေးကာ နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်ပေးနေမိပြန်သည်။” ဟင့်..အင့်.. အောင်ရယ်..လိုးမှာဖြင့်လိုးတော့ကွယ်..မမ မနေတတ်တော့ဘူး.. အောင်လေးရယ် .. ” လှမေ၏ပေါင်နှစ်လုံးကို ဒူးကွေးကာထောင်လိုက်ပြီး စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးထဲသို့ အောင်မင်းကသူ့လီးကြီးနဲ့အသာတေ့ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တော့၏။
” ဗြစ်..ဗြစ်..ဖွတ်..ဖွတ် ”” အား..အား..နာ..တယ် အောင်ရယ်.. ”အောင်မင်း၏ရင်ဘတ်ကို သူမ စုံတွန်းထားလိုက်သည်။ အရင်ကအလိုးခံ ဘူးခဲ့ပေမဲ့ အခု အသစ်ဖြစ်နေတဲ့ စောက်ပတ်လေးက ကျဉ်းပြီး ကျိန်းနေ၏။ သို့သော် အောင်မင်း၏လီးကြီးတချောင်းလုံးကတော့လှမေ၏စောက်ပတ်လေးထဲသို့ တဆုံးဝင်သွားခဲ့ရချေပြီ။ အောင်မင်းက သူမ၏နို့ကြီးများကိုတလှည့်စီစို့ပေးနေတော့ရာလှမေခမျာ တင်ပါးကြီးကိုတွန့်ပြီး ရမ်းလိုက်ရပြီးစောက်ရည်များလဲပိုထွက်လာတော့သည်။
” ပြွတ် . .ဖွတ်..ဖွတ်..ပြွတ် ”အောင်မင်းက တချက် ချင်းစီလိုးပေးတော့ လှမေ ခံနိုင်ရည် နဲနဲ ရှိလာသည် ။ သူမ၏စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းလေးများသည် ဆောင့်လိုက်ရင်ခွက်ဝင်သွားပြီးလီးပြန်အနှုတ်တွင် လီးတန်ကြီးနှင့်ကပ်ကပ်ပြီးပါလာကာ အပြင်သို့စူ စူထွက်လာကြရ၏ ။ ထွက်လာသော အရည်များကြောင့် လီးဝင်ထွက်သံများ ပိုကျယ်လာပြီးတရှိန်ထိုး ဆောင့်ဝင်လာတဲ့ အောင်မင်း၏လီးကြီးကို လှမေ၏ စောက်ပတ်အတွင်း သားလေးများက ညှပ်ပြီးဆွဲဆွဲသည်။ အောင်မင်းကအားရပါးရဆောင့်နေသလိုသူမကလည်းကော့ကော့ပြီး အလိုးခံနေသည်။
” ဟင့်..ဟင့် .. နာနာဆောင့် စမ်းပါ..အောင်ရယ် .. မမပြီးချင်ပြီ.. ” ” ဖွတ်.. ပြွတ်..ဖွတ်..အာ့..အား ”ဒီတခါမှာတော့ အောင်မင်းလဲ ရင်ထဲမှာဘလောင်ဆူနေပြီမို့ ခပ်သွက် သွက်ကြီး ဆောင့် ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်တော့သည် ။ ထို့နောက် လီး တချောင်းလုံး ကျင်တက်လာကာ သုံးလေးချက်မျှ အားကုန်ဆောင့်ပြီး လီးတန်ကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲ အဆုံး နှစ်လျှက် သုတ်ရည်တွေ တလျှော့ပြီး တလျှော့ ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။မလှမေကလည်း အောင်မင်း၏ခါးကိုခြေနှစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲချိတ်လျက် သူမ၏ တင်ပါးကြီး ကော့တင် ထားရင်း တွန့်လိမ် လူးလွန့်နေတော့ သတည်း. .။ ပြီးပါပြီ…..။ Crd